कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् विसं २०७६ साल बैशाख २ गते सोमबारको राशिफल « Dhankuta Khabar
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् विसं २०७६ साल बैशाख २ गते सोमबारको राशिफल
प्रकाशित मिति : Apr 14, 2019
श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल बैशाख २ गते सोमबार इश्वी सन् २०१९ अप्रिल १५ तारीख चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी तिथी मघा नक्षत्र गण्ड योग वणिज करण चन्द्रमा सिंह राशिमा आनन्दादि योगमा ध्वांक्ष योग सुर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु स्मार्तहरुको कामदा एकादशीव्रत, भ.पु. महाकालीमहालक्ष्मी यात्रा, टोखामा चण्डेश्वरी मूल रथयात्रा, मध्यपुर थिमिमा बालकुमारी यात्रा – ज्योपं. सरोज घिमिरे/धनकुटा खबर ।
अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । बौधिक ब्यतित्व हरुको साथ सहयोग द्वारा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । आम्दानिका मनग्य श्रोत साधनहरु फेला पर्नेछन । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा अधिक समय खर्चनु पर्नेछ । स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुनसक्नेछ ।
पारिवारिक साथ सहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । कार्य प्रतिको लगनसिलतामा बृद्यिहुनाले सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको योग रहनेछ । सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहने योग रहेकोछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । दान्पत्य सम्बन्धमा सुधारको सम्भाबना रहेकोछ ।
प्रतिपक्षीहरु कमजोर रहनेछन । मित्र तथा दाजु भाई हरुको साथ सहयोग ले कार्यक्षेत्र सबल रहला तथा भाग्योदयको योग रहेकोछ । सामान्य शकां उपशकांहरुको निबारण हुने दिन रहेको छ । परीश्रमको राम्रो फल प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
खानपानको गडबढिले स्वास्थमा सामान्य असर रहला । सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानसिक समस्या आई पर्ने छन् । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । मित्रजनको साथसहयोमा बृद्धि हुनेछ ।
आटशाहसको बृद्यिहुने योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा भने सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । दाम्पत्य शुखमा बाधा पर्न सक्छ । मातृ पक्षमा कसैको स्वास्थमा सामान्य असर रहला । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । यात्रामा सजग रहनु होला ।
नेत्र सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । सौदर्यका क्षेत्रमा खर्चहुने योग रहेको छ । अनावश्यक यात्रा हुन सक्छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मित्र वा दाजुभाई बिच मनमुटाब हुन सक्छ ।
आकस्मिक धनलाभ हुने योग रहेको छ । यात्रा आम्दानि मुलक रहन सक्छ । कुलकुटुम्बको साथ सहयोग ले नयाँ कार्यको थालनि हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
सामान्य कार्यका निम्ति धेरै समय र परिश्रम खर्चिनु पर्ने छ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्छन । पारीवारीक झोरझमेला ले सताउन सक्नेछ । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर भएको खण्डमा भने अरुको बिश्वास जितिने छ ।
यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्छ । काम गर्दा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला सामान्य अप्जस आईपर्न सक्नेछ । अरुले गरेको गलत कामको आरोप तपाईले भोग्नु पर्ला । मित्रजन हरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । पराक्रममा भने बृद्धि हुनेछ ।
आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । तपाईको बोलिको कारण आफन्तजन हरु रुष्ट रहन सक्छन । नजिकका ब्यक्ति बाट धोका हुन सक्नेछ । आम्दानि भने मध्यम रहनेछ ।